Sidan ayaad ku soo celin kartaa Airpod-kaaga haddii aad aragto inay ku jiraan hawl aan caadi ahayn | Waxaan ka socdaa mac
Sidan ayaad ku soo celin kartaa Airpod-kaaga haddii aad aragto inay leeyihiin hawl aan caadi ahayn
Horeba maqaalkii hore waxaan ku soo sheegnay haddii aad ka fekereyso inaad AirPods ka hesho Apple lafteeda Kirismaskaan waxaad la kulmi doontaa wax dhib ah taasna waa in taariikhaha bixinta horay loo siiyay Janaayo. Si kastaba ha noqotee, maahan inaan gacmaheena madaxa saarnno sidoo kale, maadaama ay horeyba u jireen meelo badan oo aan ka heli karno. tusaale waxaan arkay qaar aan furan xitaa meelaha gacanta labaad ee Gran Canaria oo qiyaastii 20 euro ka yar qiimaha asalka ah.
Laakiin taasi maahan waxa aan rabo inaan hadda kaala hadlo. Waxa aan rabo inaan kuu sheego ayaa ah in kastoo laga yaabo inaad loo isticmaalo dib u soo celinta alaabooyinka sida iPad, iPhone ama Mac laftiisa, haddana waxay noqon kartaa, in kasta oo aad leedahay AirPods, wali ma aadan arkin baahida loo qabo in dib loo soo celiyo.
Waxaa jira isticmaaleyaal cayiman, oo markay arkeen anshax xumo ka jirta AirPods-kooda, aan haysan wax kala doorbid ah oo aan ahayn inay soo celiyaan si ay ula xalliyaan dhibaatada iyaga la jirta, taas oo xaalado badan oo hore ay u noqon karto cilad ku timaadda xiriirka ka socda iPhone ama batteriga. Dhibaatooyinkan gabi ahaanba waa la xalliyaa haddii aad dib u soo celiso.
Soo celinta AirPods waa mid deg deg ah waana inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan raadineynaa badhanka leh kiiska AirPods xagga dambe. Anaga oo tixgelinayna inaynu leenahay AirPods kiiska gudihiisa si aan u awoodno hawshan, waxaan fureynaa daboolka kiiska oo annaga oo aan ka saarin AirPods Waxaan riixnaa badhanka gadaal ee kiiska inta udhaxeysa 3 iyo 5 ilbidhiqsi waxaanan sugeynaa iftiinka inuu bilig bilig yeelo
Hadda waxaan tagnaa iPhone-ka iyo daaran Dejinta> Bluetooth waxaan xariga ka jareynaa AirPods-ka.
Tallaabada ugu dambeysa waa in dib loogu xiro iyaga si nidaamka si buuxda dib loogu soo celiyo.
Maskaxda ku hay in kaliya adoo riixaya badhanka dambe, nidaamku wuxuu ku qasbayaa dib u soo celin, laakiin khibradeyda waxaan ka fiicanahay in lala sameeyo xiriir cusub iyaga sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Sidan ayaad ku soo celin kartaa Airpod-kaaga haddii aad aragto inay leeyihiin hawl aan caadi ahayn
Ku xirida dekedda Apple Watch oo leh nashqad iyo bir bir ah
Apple ma sii haysato AirPods diyaar ah oo la bixin karo kahor Kirismaska